मालिभल्ड: मार्टिन भ्रिजल्याण्ड
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	16 अक्टोबर 2019 मा	•5टिप्पणिहरु
मलाई हालसालै सोधिएको थियो कि म किसानहरूको विरोधलाई समर्थन गर्न चाहन्छु। मैले छोटो र स्पष्ट जवाफ दिएँ। अवश्य पनि म किसानहरूको विरोधलाई समर्थन गर्दछु, तर हामीले राजनीतिज्ञहरूतर्फ फर्किनु हुँदैन किनभने तिनीहरू 'पहिलो स्थानमा' समस्या हुन्। नेदरल्याण्डमा विरोध प्रदर्शन भनेको पूर्ण encapsulated बाहेक अरु केहि छैन। तपाईंले […]
कुल भ्रमण: 14.788.869
के बोरिस जोनसनको नाफा नेक्सिटको अग्रगामी हो? युरोप को लागी मेरो भविष्यवाणी
बैजनी शुक्रवार: कसरी स्कूलमा बच्चाहरू LGBTI प्रचारको साथ अभिभूत हुन्छन्
मार्कोस op के बोरिस जोनसनको नाफा नेक्सिटको अग्रगामी हो? युरोप को लागी मेरो भविष्यवाणी
मार्टिन भिजल्याण्ड op के बोरिस जोनसनको नाफा नेक्सिटको अग्रगामी हो? युरोप को लागी मेरो भविष्यवाणी
XenderN op के बोरिस जोनसनको नाफा नेक्सिटको अग्रगामी हो? युरोप को लागी मेरो भविष्यवाणी
सनशाइन op बैजनी शुक्रवार: कसरी स्कूलमा बच्चाहरू LGBTI प्रचारको साथ अभिभूत हुन्छन्
मार्टिन भिजल्याण्ड op बैजनी शुक्रवार: कसरी स्कूलमा बच्चाहरू LGBTI प्रचारको साथ अभिभूत हुन्छन्